Waxaan ku tijaabinay nalalka casriga ah ee LIFX HomeKit | Wararka IPhone
Waxaan ku tijaabinay nalalka casriga ah ee LIFX HomeKit
In kasta oo qalabka ku habboon ee HomeKit ay sii kordhayaan, haddana dhowr magac ayaa si toos ah wax soo saarkooda ugu iibiya Apple Store, LIFX-na waa mid ka mid ah kuwa mudnaanta leh. Iyada oo leh buug-yare ballaaran oo nalalka casriga ah la jaan qaada Apple, Google Home, Cortana iyo Alexa, Nalalka casriga ah ee LIFX waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay kuwa doonaya inay ku raaxaystaan ​​otomatiga iyo xakamaynta nalalka guryaha ee ka yimaada iPhone, Apple Watch, ama amarrada codka ee Siri. Waxaan tijaabinay noocyadooda LIFX Mini iyo A19 waxaana wadaagnaa dareenkeena hoose.
1 Laba nooc oo kala duwan
2 Dejinta iyo hawlgalka
3 HomeKit, otomaatiyada, Siri iyo HomePod
Laba nooc oo kala duwan
Badanaa ma jiraan noocyo badan oo guluubyo caqli badan oo isku nooc ah, laakiin haddana LIFX waxay ku sharadaysaa moodooyin kala duwan oo ka jawaabaya baahiyo kala duwan. Markan waxaan awoodnay inaan tijaabinno laba nalal oo midabbo badan leh oo leh astaamo kala duwan qaab kasta:
LIFX A19: Multicolor LED (16 milyan oo midab), qafiif ah, WiFi, oo leh awood 11W oo u dhiganta 75W iyo 1100 lumens.
LIFX Mini: Multicolor LED (16 milyan oo midab), waaber, WiFi, oo leh awood 9W oo u dhiganta 60W iyo 800 lumens.
Marka lagu daro kala duwanaanshaha qeexitaanka, waxaa sidoo kale ku jira nashqadaha nalalka, oo ah qaabka A19 oo ka weyn isla markaana leh qaab fidsan oo asal ah. LIFX Mini wuu kayaryahay, aad ayuu ugu egyahay cabirkiisa guluubka caadiga ah iyo qaab isku muuqaal eg. Faahfaahintani waa mid ka mid ah wanaaggeeda ugu weyn: waxaad dhigi kartaa nalalka LIFX Mini meel kasta, uma baahnid inaad ka walwasho haddii ay ka soo bixi karto laambadda sida ay ugu dhacdo nalalka kale ee casriga ah.
Dejinta iyo hawlgalka
Isku xirnaanta nalalka waxaa lagu samayn karaa dalabkaaga si aad u fudud. Sida moodooyinka kale, isku xirnaanta WiFi waxay kaa dhigeysaa inaanad dhibaato ku qabin masaafada ay u jirto xarunta dhexe ee HomeKit, laakiin sidoo kale nalalkaan wax dhibaato ah kalama kulmi doontid router-kaaga laba-dhejiska ah. Kaliya waxay la jaan qaadi karaan shabakadaha 2,4Ghz WiFi laakiin wax dhibaato ah kuma qabaan shabakadaha isku magaca u isticmaala shabakadaha 2,4 iyo 5GHz, kuwaas oo keena madax xanuun badan in kabadan hal.
Nalka LIFX Mini wuxuu si toos ah ula jaan qaadi karaa HomeKit, laakiin Qaabka A19 waa ka dib cusbooneysiin software ah, markaa waa inaad marka hore ku darto arjiga, cusbooneysiiso ka dibna wuxuu ku siin doonaa lambarka HomeKit si aad ugu darto qalabkaaga ku jira barnaamijka 'iOS Home'. Waxay sidoo kale la jaan qaadi karaan dhammaan kaaliyeyaasha codka: Google Home, Cortana iyo Amazon Echo. Uma baahnid inaad guursatid caawiye waxaadna u adeegsan kartaa habab kala duwan hareeraha gurigaaga adoo ka xakameynaya nalalkaaga LIFX dhammaantood.
Sida had iyo jeer dhacda qalabkan, soo saaraha codsigiisa ayaa na siiya ikhtiyaarro badan oo ka badan dalabka Guriga IOS. Xaaladdan oo kale, shaqooyinku waa ku dhowaad aan dhammaad lahayn, oo leh muuqaalo aan la tirin karin iyo saameyn lagu daro isbeddelada midabka dhaqameed.. Dabcan waxaad ku maamuli kartaa heerkulka nalka cad ee guluubka gacanta, oo xitaa adeegsan kartaa "Maalin iyo Galab" shaqo (maalin iyo mugdi) taas oo ku kala duwan xoojinta iyo heer kulka maalinta oo dhan.
Ma aanan arkin shaqadan ilaa iyo haatan mid ka mid ah nalalka aan awooday inaan tijaabiyo, waxayna ka kooban tahay barnaamijyo saacado xiriir ah maalintii oo dhan si iftiinka qolka uu u leeyahay xoogaa kala duwan (xitaa off) iyo heer kulka. Ku soo toos laydh cayiman, kaas oo ku kala duwan maalintii oo dhan iyo in habeenkii kala duwanaado ilaa uu seexdo. Waqti ku qaadashada shaqadan waxaad ku guuleysan kartaa nalka qolkaaga oo aad ugu dhow kan dabiiciga ah.
HomeKit, otomaatiyada, Siri iyo HomePod
Qodobka adag ee sida aadka ah noogu xiisaynaya halkan waa is dhexgalkiisa barnaamijka Apple. HomeKit wuxuu soo dhaweynayaa dhammaan noocyada si ay noo siiso maamuus u gaar ah kaas oo leh waxaan ka heli karnaa badeecooyin noocyo kala duwan si aan ula macaamilno midba midka kale, abuurista muuqaallo iyo qalab otomaatig ah oo saameeya qalabyada kala duwan.
In kasta oo xakamaynta shaqooyinka nalalka nalka ay aad uga taxaddaraan arjiga guriga, xaqiiqda ah in la midoobistooda HomeKit ay noo saamaxeyso inaan ku xakameyno Siri, Apple Watch, iPhone, iPad ama HomePod ayaa ka dhigeysa soo jiidashadeeda loogu talagalay dadka isticmaala alaabada Apple. Haddii showga "Maalinta iyo Makhribka" ay uqalmeen in wakhti lagu qaato, Qalabaynta HomeKit iyo muuqaalku waxay ka dhigi doonaan nalalka casriga ah qalab aad rabto inaad geliso qol kasta oo gurigaaga ah.
Ku kici iyaga dareemayaasha dhaqdhaqaaqa, kuwaas oo si otomaatig ah u baxa marka qorraxdu dhacdo, ama kaliya haddii uu jiro qof guriga jooga, oo si otomaatig ah u demiya marka aanu qofna guriga joogin, ama waqti cayiman ... fursadaha HomeKit waa kuwo aan dhammaad lahayn oo waxaa habboon in sida ugu wanaagsan looga faa'iideysto.
Nalalka casriga ah ayaa noqday mid ka mid ah qalabka loogu jecel yahay kuwa soo gala adduunka HomeKit, iyo sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee la bilaabi karo. Labadan nal, LIFX Mini iyo A19, waxaan leenahay labo shey oo isku mid ah laakiin kala duwanaansho muhiim ah oo ku saabsan dhalaalka iyo cabirka. THE LIFX Mini waa nal ku habboon waddada dhinaceeda meel kasta oo guriga ka mid ah, halka nooca A19 waxaan kugula talin lahaa meelahaas oo ay ku yaalliin 1100 dhumucdeeda runtii lagama maarmaan yihiin, iyadoo la tixgelinayo baaxaddeeda ballaaran. Lagu kalsoonaan karo oo la jaan qaadi kara barxad kasta oo hadda jirta, iyagu waa laba beddel oo aad u wanaagsan oo loogu talagalay kuwa doonaya in ay guryahooda ku kacaan iyagoo aan cidna la guursan oo u adeegsan nooc kasta oo kaaliye dalwad ah.
Nalalka waxaa laga heli karaa Amazon, oo leh nooca A19 oo qiimahiisu yahay € 69 (isku xirka) iyo LIFX Mini guluubka € 53 (isku xirka). Waxaad sidoo kale ku heli kartaa iyaga Apple Store internetka qiimo aad isugu eg.
€53 a €69
Nalalka casriga ah ee LIFX
La jaan qaada dhammaan kaaliyeyaasha dalwaddii
Dareen leh, barnaamij muuqaal-hodan ah
800 iyo 1100 awood lumen
LIFX Mini oo leh cabbir iyo naqshad la mid ah guluubka nalka dhaqameed
Dhibaato malahan router-labo-band
Qiimaha ka sareeya tartanka
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Waxaan ku tijaabinay nalalka casriga ah ee LIFX HomeKit
Apple waxay 26-ka July ka furi doontaa Dukaan cusub oo Apple ah magaalada Milano oo leh naqshad gaar ah
Monument Valley 2, waa qayb in badan la sugayay oo waxbadan laga reebay